Saturday December 19, 2020 - 10:38:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar khasaara badan dhaliyay oo shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
sawir cusub meydadka saraakiishii Gaalkacyo lagu dilay
Saraakiishii ugu sarraysa ciidamada dowladda Federeelka ee gobollada dhexe ayaa ku go'ay weerarkii naf hurnimo ee shalay gelinkii dambe ay Al Shabaab ka fuliyeen Koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Madaxya weyntii saraakiisha Ashahaadda ladirirka ee dowladaha shisheeye ay usoo carbiyeen in ay hor istaagaan halganka Jihaadka gobollada dhexe ayaa ku baxay weerarkii shalay sida ay sheegayaan ilo wareedyo dhanka amniga ah.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa qaraxii shalay ku dhintay illaa 14 qof oo 5 kamid ah ay ahaayeen saraakiil sarsare halka 9ka kale ay ahaayeen ciidamadii ilaalada u ahaa saraakiisha dhimatay.
Saraakiisha dhimatay ayaa kala ahaa Jeneraal Qooje Dagaari oo ahaa taliyaha Qeybta 21aad ee mas'uulka ka ah gobollada dhexe.
Waxaa sidoo kale weerarkii shalay ku dhintay Col.Axmed Baarleef oo katirsanaa taliyaasha ciidamada meleteriga dowladda Federaalka, Max'med Yaasiin Tumeey oo horay usoo noqday duqa Gaalkacyo dhanka Puntland balse hadda kamid ahaa saraakiisha ciidamada Bangaraafta ee Mareykanku tababaray.
Sawirro lagasoo qaaday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa muujinaya meydadka askarta iyo saraakiisha ladilay oo goobta daadsan waxaana Koonfurta Gaalkacyo lagasoo wariyay xaalad jiha wareer ah oo usoo galay mas'uuliyiinta maamulka 'Galmudug' iyo saraakiisha ciidanka.
Weerarkan halaagga badan dhaliyay waxaa ka badbaaday R/wasaare Max'med Xuseen Rooble oo ujeedku ahaa in isaga lagu khaarijiyo sida ay sheegtay Xarakada Al Shabaab ee mas'uulka ka aheyd wixii shalay Koonfurta Gaalkacyo ka dhacay.
Askari lagu dilay Dayniile iyo qarax ka dhacay Madiina.